आत्मविश्वास कसरी बढाउन सकिन्छ ?
असफलताबाट फेरी कसरि उठ्ने ?
डिप्रेसनका लक्षणहरु के-के हुन् ?
डिप्रेसनलाई सामन्य अर्थमा बुझ्दा नैराश्यताको बिमारी भनेर बुझ्ने गरिन्छ । तर नैराश्यता नै डिप्रेसन होइन । डिप्रेसन एउटा यस्तो अवस्था हो, जसमा हाम्रो सोंच,...
‘स्मार्ट’ कसरी बन्ने ?
'स्मार्ट' हुनु सबैको सबैको चाहना हुन्छ । बाहिरि आवरणले नभई भित्र ज्ञान र व्यवहारले 'स्मार्ट' हुनु जरुरि छ । त्यसको लागि निम्न कुराहरुमा ध्यान...
आफ्ना विचार प्रभावकारी ढंगले कसरि राख्ने ?
छलफलमा हामीहरु धेरैजसो सरिक हुन्छौं । तर, आफ्ना विचारहरु भने राख्न सकिरहेका हुँदैनौ । र, कतिपय अवस्थामा तर्कहरु राखे पनि हाम्रा ती तर्क तथा...
खुशी कसरि रहने ?
भौतिक पूर्वाधारहरुले जीवनशैलीलाई सहज बनाएतापनि मानिस दिनप्रतिदिन खुशी देखी टाढा गइरहेको छ । अस्तव्यस्त दैनिकीमा मानिसले आफूलाई नै बिर्सिरहेको छ । तर वास्तवमा खुशीले...
ज्याक माका सफलताका सुत्रहरु
ज्याक मा चीनको सबैभन्दा धनि व्यक्ति हुन्। उनि टुरिस्ट गाईडबाट उद्धमी बनेका सुचना प्रविधि क्षेत्रका व्यवसायी हुन्। विश्वका सफल व्यवसायीहरु मध्येमा चिनिने उनको जन्म...
उच्च विचार राख्ने र औसत विचार राख्ने मानिसमा फरक
विचारले नै मानिसलाई काम र सफलतातिर डोहोर्याउँछ। जसले ठूलो सफलता हात पार्छ, उसले उच्च विचारले काम गरेको हुनाले त्यो सफलता हात पारेको हुन्छ। उच्च...
आफ्नो समय-तालिकालाई कसरि प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ ?
सफलता हासिल गर्नको लागि समय-व्यवस्थापन महत्वपूर्ण हतियार हो । त्यसैले समय व्यवस्थापन गर्नको लागि समय तालिका बनाएर काम गर्नु जरुरि छ । कतिपय अवस्थामा...
तपाईंलाई यस्तो भइरहेको छ भने आफूले गरिरहेको काम छोड्नुस्
काम पाउनु अवसरको कुरा हो। पैसाको अभाव टार्नको लागि केही समय ठीक भएपनि तपाईंको लागि जुनसुकै काम उपयुक्त नहुन सक्छ। अगाडी बढ्नको लागि पैसा...
बिहानमा कसरी छिटो उठ्न सकिन्छ ?
बिहान उठ्ने कुरा सुन्दा सामान्य लागेपनि यसले त्यो दिनभरिलाई नै प्रभावित गर्छ। बिहान छिटो उठ्नको लागि कतिपयलाई समस्या समेत हुन्छ। तर केही तरिका अपनाएर...
123...2323 पृष्ठ 1